သံရှာရန် | November 2019
ကွန်ပျူတာများအတွက်မည်မျှ RAM ကိုလိုအပ်သလဲ?
နေ့သည်ကောင်းသော။ ယနေ့ဆောင်းပါးမှတ်ဉာဏ်, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာများအပေါ်အရေအတွက်က (- RAM ကိုမကြာခဏအတိုကောက် RAM ကို) အားကျိန် ဆို. ပူဇော်သည်။ တစ်ဦးကို PC နှေးကွေးမှစတင်သည်, ဂိမ်းများနှင့် applications များတုံ့ဖွင့်လှစ်ခြင်း, Monitor ပေါ်မှာရုပ်ပုံ "အကွောဆှဲ" ကိုစတင်သည်က Hard disk ပေါ်မှာဝန်ကိုတိုးပွားစေ - RAM ကိုမှတ်ဉာဏ်အလုံအလောက်မပါလျှင်သင်၏ကွန်ပျူတာအတွင်းကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။
ကြီးမားသောသေတ္တာများအနေဖြင့်အသေးစားယူနစ်မှ: အကို PC ၏ဆင့်ကဲဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်များအတွက်
ကွန်ပျူတာများ၏သမိုင်းပြီးခဲ့သည့်ရာစုအလယ်အနေဖြင့်ကြက်။ လေးဆယ်ခုနှစ်တွင်သိပ္ပံပညာရှင်များတက်ကြွစွာအီလက်ထရွန်းနစ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာစူးစမ်းနှင့်ကွန်ပျူတာနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စတင်များအတွက် devices များစမ်းသပ်နမူနာကိုဖန်တီးရန်စတင်ပါပြီ။ ရာထူးပထမဦးဆုံးကွန်ပျူတာကမ္ဘာမြေ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်တစ်ချိန်တည်းန်းကျင်သည်ထင်ရှားတစ်ဦးချင်းစီ၏အတော်ကြာယူနစ်, အကြားခွဲခြားထားတယ်။
ဤဆောင်းပါးသည်လွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်အကြောင်းကိုငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်တဲ့ဇာတ်လမ်းကိုရေးသားဖို့ငါ့ကိုသတိပေးခံရ။ ဒီလိုဝယ်ယူကြောင်း, ကဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါထင်ဘယ်တော့မှငါနှင့်အတူပါသည်: ငါအတှေ့အကွုံတစ်စုံတစ်ဦးကပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှကူညီပေးပါမည်, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးတူညီထွန်ခြစ်အပေါ် step ဖို့မမျှော်လင့်ပါတယ်ပိုက်ဆံမရှိ, ကွန်ပျူတာ ... ... ဖျေါပွခကျြက start အမိန့်အဖြစ်မျှ အရာအားလုံးဟုတ်ကဲ့ ... လုပ်ဖို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးအပေါ်လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်းသည်လမ်းတလျှောက်တွင်မယ်, ငါတို့တိုင်းပြည်အတွက်ဥပဒေများကိုဖြည့်ဆည်း / လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့နေကြတယ်တဲ့သမ်မာအောင်, သင်ဖတ်နေနေစဉ်, ဖြစ်ကောင်း, ဆောင်းပါးမရှိတော့ဒီတော့သက်ဆိုင်ရာလိမ့်မည်။ ခံခဲ့ရပါတယ်
တရုတ်ချောင်းကို! အတု disk ကိုစွမ်းရည်မြှင့် - မီဒီယာများ၏အမှန်တကယ်အရွယ်အစားထွက်ရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လို?
ကောင်းသောအားလုံးနာရီ! တရုတ်ကွန်ပျူတာထုတ်ကုန် (flash drive ကို, disk တွေ, မှတ်ဉာဏ်ကဒ်များ, etc) ၏ကြီးထွားလာလူကြိုက်များနှင့်အတူဤတွင်လက်ငင်းငွေချေချင်သူကို "လက်သမား" ပေါ်လာတော့တယ်။ နှင့်အညီ, မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကဒီလမ်းကြောင်းသစ်ကိုသာကြီးထွားလာ, ကံမကောင်း ... ဒီ post ကိုငါပေးပြီခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုကနေမွေးဖွားခဲ့သည်သည်ကဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့ (ကတရုတ်အွန်လိုင်း store မှာဝယ်) အသစ်တခုက USB flash drive ကို 64 GB အထိ, fix ကိုကူညီဖို့တောင်းခဲ့သည်မဟုတ်ယ့်ပုံပဲ က။
အပူကနေသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကိုဘယ်လို - အရည်အသွေးမြင့်အေးကိုရွေးချယ်ပါ
ထိုအခါအပူ၌၎င်း, အဆုံးအပေါ်နေ့ရက်ကာလအဘို့တစ်ခါတစ်ရံလုပ်ကိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာများမှအအေး။ ထိုအမရှိသလောက်ကျွန်တော်တစ်ဦးအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ကွန်ပျူတာမျက်စိမှမမြင်ရတဲ့အချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောတအေးရဲ့ပုံမှန်လည်ပတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားကြဘူး။ ထိုသို့အဘယျသို့ထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားပါနှင့်အဖြစ် befits သင်၏ကွန်ပျူတာများအတွက်သင့်လျော်သောအေး။
တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ် matrix ကိုအမျိုးအစား LCD ကို (LCD-, TFT-) မော်နီတာ: Ads က IPS, PLS, TN, TN + ရုပ်ရှင်, VA သို့
နေ့သည်ကောင်းသော။ အဆိုပါမော်နီတာ၏ရွေးချယ်ရေးအတွက်အတော်များများကအသုံးပြုသူများသည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ၏ခင်းကျင်း (matrix ကို - ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပေါ်လာသောအရာမဆို LCD ကိုမော်နီတာ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်း) မှအာရုံစိုက်မထားဘူး, ထိုအရပ်ကနေလမ်းဖြင့်, (များလွန်းသဖြင့်, ကိရိယာ၏စျေးနှုန်း!) မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပုံရိပ်၏အရည်အသွေးအပေါ်အလွန်အမင်းမှီခိုသည်။ တကယ်တော့အများအပြားကခညျြးနှီးဆှေးနှေးကြောင်းငြင်းခုန်လိုခြင်းနှင့် (ဥပမာ) မည်သည့်ခေတ်သစ်လက်တော့ - အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရုပ်ပုံပေးပါသည်။
ဂိမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုကဒ်ဆယ်: အရာအားလုံးက "အစွန်းရောက်" တွင်ဝင်
PC ကိုအရင်းအမြစ်များကိုတောင်းဆိုနေတာခေတ်သစ်ကွန်ပျူတာဂိမ်း။ high resolution ကတော့ထဲမှာနှင့်တည်ငြိမ် FPS နှင့်အတူဂိမ်းကစား၏ပရိသတ်များဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်တွင်သင်၏ device ကိုဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ စျေးကွက်တွင်အမျိုးမျိုးသောဒီဇိုင်းများအတွက် Nvidia နှင့် Radeon ထံမှအများအပြားမော်ဒယ်များရှိပါတယ်။ အဆိုပါရွေးချယ်မှုကို 2019 ဂိမ်းအစအဦးအတှကျအကောငျးဆုံးကဗီဒီယိုကဒ်ပါဝင်သည်။
အကောင်းဆုံးကိုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူထိပ်တန်း: ဂိမ်းကစားခြင်းများအတွက် Monitor ကိုရွေးချယ်ခြင်း
ကွန်ပျူတာဂိမ်း၏ကျမ်းပိုဒ်၏အမြင့်ဆုံးခံစားဘို့ထိပ်တန်းအဆုံး Hardware နဲ့ဂိမ်းစက်များဝယ်ယူခံရဖို့လုံလောကျဘူး။ အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းမော်နီတာဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းမော်ဒယ်များသာမန်ရုံးနှင့်အရွယ်အစားနှင့်ပုံရိပ်အရည်အသွေးကနေကွဲပြားခြားနားပါသည်။ မာတိကာရွေးချယ်ရေးလိုအပ်ချက်ထောင့်ဖြတ်ဆုံးဖြတ်ချက်စားပွဲတင်: ဘယ်လိုဂိမ်းတစ်ခုမော်နီတာရွေးချယ်ဖို့ဝိသေသမက်တရစ်ကော်နက်ရှင် - ထိပ်ဆုံး 10 အကောင်းဆုံးအနိမ့်သောစျေးနှုန်း segment ကို ASUS က VS278Q LG က 22MP58VQ AOC G2260VWQ6 အလယ်အလတ်စျေးနှုန်း segment ကို ASUS က VG248QE Samsung က U28E590D Acer မှ KG271Cbmidpx High-: ဘုံမော်နီတာ Refresh Rate စားပွဲတင် Matrix အရွယ်အစား စျေးနှုန်း segment ကို ASUS က ROG Strix XG27VQ LG က 34UC79G Acer မှ XZ321QUbmijpphzx Alienware AW3418DW စားပွဲတင်: ရွေးချယ်ရေးစံ၏စာရင်းထဲကမော်နီတာ၏နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးဂိမ်းမော်နီတာရွေးချယ်ရာတွင်ထိုကဲ့သို့အရွယ်အစား, extension ကို, refresh Rate ကို, နှင့် matrix အဖြစ်အကောင့်စံသို့ယူသင့်ပါတယ်သည့်အခါ ကွန်နက်ရှင်အမျိုးအစား။
2019 ခုနှစ်အတွက်သတ္တုတူးဖော်ရေး cryptocurrency 10 အကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်ကတ်များ
သတ္တုတွင်းပျမ်းမျှအသုံးပြုသူများအတွက်ပိုပြီးတတ်နိုင်ဖြစ်လာနှင့်တည်ငြိမ်ဝင်ငွေဆောင်တတ်၏ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့နှင့်တန်ဖိုးရှိရှိင်ငွေ cryptocurrency များအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောပစ္စည်းကိရိယာများဆည်းပူးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ စျေးကွက်ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်ကဒ်များကြီးမားတဲ့အမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်းပေမယ်သာအချို့သောသူတို့ထဲကသတ္တုတူးဖော်ရေးများအတွက်စံပြဖြစ်ကြသည်။
ကျိုး pixels ကိုရှာဖွေ utility (ဝယ်ယူသောအခါ, မော်နီတာစစျဆေးဖို့ဘယ်လိုစမ်းသပ် 100%!)
နေ့သည်ကောင်းသော။ monitor - ဆိုကွန်ပျူတာနှင့်ပေါ်မှာပုံ၏အရည်အသွေးကအလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု - သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံ, ဒါပေမယ့်လည်းထိုရူပါရုံကိုမသာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မော်နီတာနှင့်အတူပါဆုံးမကြာခဏပြဿနာများတစ်ခုမှာ - သေလွန်သောသူတို့သည် pixels ကို၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ သေလွန်သောသူတို့သည် pixel - ပုံရိပ်တွေပြောင်းလဲနေတဲ့သည့်အခါယင်း၏အရောင်မပြောင်းဘူးသော screen ပေါ်မှာတစ်အချက်။
အိမ်မှာနေတဲ့ပရင်တာရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? တဦးတည်း သာ. ကောင်း၏ရာပရင်တာအမျိုးအစားများ,
မင်္ဂလာပါ အလွန်အသုံးဝင်သောအရာ - ငါပရင်တာကြောင့်ဟူမူကား, အမေရိကတိုက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမထင်မမှတ်။ ထို့အပြင်, (သူ့ကိုသင်ခန်းစာအစီရင်ခံစာများ, ဒီပလိုမာ, etc ထွက် print ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်) ကြောငျးသားမြားအတှကျ, ဒါပေမယ့်လည်းအခြားအသုံးပြုသူများအဘို့မသာ။ အခုတော့ရောင်းချပေါ်တွင်သင်ပရင်တာအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်, ရာ၏စျေးနှုန်းအကြိမ်သောင်းချီအားဖြင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။
Keyboard ကို Gembird: လက်ျာဟာ့ဒ်ဝဲကိုရှေးခယျြဖို့ဘယ်လို
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာ - ဆိုအသုံးပြုသူ၏ "သနျ့ရှငျးသော၏သန့်ရှင်းသောအ" ။ အရင်ကဆိုရင်နှင့်အတွေ့အကြုံရအညီအမျှအရေးကြီးသော PC ကိုသုံးစွဲသူများ, မသာကိရိယာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ဝိသေသလက္ခဏာများ, ဒါပေမယ့်လည်းအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးများအတွက်နှစ်ဦးစလုံး။ ဟာ့ဒ်ဝဲရွေးချယ်စရာကနေစစ်ဆင်ရေး၏ထိရောက်မှုနှင့်မြန်နှုန်းအပေါ်အကြီးအကျယ်မူတည်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အာရုံစိုက်မှုအများကြီးပေးဆောင်ရပါမည်။
ရုရှားတွင် Xiaomi ကလက်တော့ပ်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
အခုတော့ကွန်ပျူတာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လိုင်းမသာကိုထုတ်လုပ်သူပစ္စည်းကိရိယာများမှအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ကြ၏။ လက်လှမ်းနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ devices များပင်အမှတ်တံဆိပ်မိုဘိုင်းနှင့်စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်၏ဖန်တီးမှုပါဝင်ပတ်သက်ထုတ်လုပ်ရန်စတင်။ အတော်လေးမကြာသေးမီကလက်ပ်တော့နှင့်တရုတ် Xiaomi က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကွာအဝေးရရှိခဲ့သည်။ တစ်လျောက်ပတ်ခြင်းနှင့်အများပြည်သူအနေဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအများကြီးဆွဲဆောင်ရဖို့ gadgets ၏ဒီဇိုင်းကိုဆက်စပ်ပေးသောဝေဖန်မှုများ, နေသော်လည်း။
ပြုပြင်မှာခိုးဖို့ကိုဘယ်လို: စသည်တို့ကိုကွန်ပျူတာများ, Laptop, ဖုန်း, ဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုစင်တာကိုရွေးချယ်ဖို့နဲ့ကွာရှင်းရဖို့မဟုတ်
နေ့သည်ကောင်းသော။ ယနေ့ (တောင်အတော်လေးသေးငယ်တဲ့မြို့) ဆိုမြို့, အဝေးတစျခုကုမ္ပဏီ (ဝန်ဆောင်မှုစင်တာများ) မှတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ်များပြုပြင်ခြင်းများတွင်ပါဝင်နေသည်: စသည်တို့ကိုကွန်ပျူတာများ, laptop, tablet, ဖုန်း, တီဗီ, 90-ies နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကယခုလုံးလုံးလြားလြား Scan ကိုမှသေးငယ်တဲ့အခွင့်အလမ်းသို့အပြေးနေသည်, ဒါပေမယ့် "ငယ်သောအရာတို့ကို" ၏အားသာချက်ယူသူကိုဝန်ထမ်းသို့ပြေး - အစစ်အမှန်ထက်ပို။
ကျွန်မ TV ကိုအဖြစ်သင့်ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပွုနိုငျသနညျး
ကွန်ပျူတာကိုအလွယ်တကူတဲ့ TV အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဆိုပါ PC ကိုတီဗီအစီအစဉ်များကိုကြည့်ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီကိုကြည့်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏အကောင်းအဆိုး cons ဆွေးနွေးရန်စို့ ... 1 ။ တီဗီကို tuner ဒါဟာတီဗီကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ကွန်ပျူတာများအတွက်အထူး Set-top Box လေးဖြစ်ပါသည်။
https://termotools.com my.termotools.com © သံရှာရန် 2019